महिलाहरुले ३० वर्ष कटेपछि यी ७ परिक्षण गर्नुपर्छ अनिवार्य, नत्र हुनेछ गम्भीर रोगको शिकार…..! – Dailny NpNews
महिलाहरुले ३० वर्ष कटेपछि यी ७ परिक्षण गर्नुपर्छ अनिवार्य, नत्र हुनेछ गम्भीर रोगको शिकार…..!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८ समय: १०:१०:५६
बढ्दै जाँदा महिलाहरुमा अनेक बिमारीहरु पनि देखा पर्न सुरु हुन्छ । महिलाको व्यस्त घरेलु जिन्दगीमा यी साना बिमारीले निकै ठुला समस्या ल्याउँछ।किनभने एक परिवारको खम्बा मानिन्छ महिलालाई र यो पनि भनिन्छ कि एक परिवारमा महिला स्वस्थ हुनाले पुरै परिवार स्वस्थ हुन्छ । त्यसैले सबै महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थप्रति निकै सजक हुन जरूरी छ ।
वास्तवमा ३० वर्ष कटेपछि त झन प्रत्येक महिलाले केहि परिक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।पेल्विक परीक्षण:महिलाले ३० वर्षको उमेरपछि पेल्विक परीक्षण गर्नु निकै जरूरी हुन्छ। यस जाँचले देखाउँछ कि गर्भाशय सही ठाउँमा छ वा छैन।
प्याप परीक्षण:यो त्यहि प्याप परिक्षण हो जुन महिलाले हरेक वर्ष गर्नुपर्छ। यस जाँचले सेर्भिकल क्यान्सर छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। यदि परीक्षण सकारात्मक आयो भने यस क्यान्सरको उपचार समयमै हुन्छ।स्तन क्यान्सर:अहिलेको समयमा महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर एक गम्भीर समस्या भएको छ। प्रारम्भिक लक्षणहरू यस रोगमा थाहा हुँदैन। महिलाहरूले स्तन क्यान्सरको जाँच प्रत्येक तीन बर्षमा नियमित रुपमा गर्नुपर्छ। म्यामोग्राफी प्रविधिहरूले यो परीक्षण गरिन्छ।
छाला परिक्षण:महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर एक गम्भीर समस्या हो। त्यस्तै, छालाको क्यान्सर पनि एक गम्भीर समस्या हो । महिलाहरुले नियमित रूपमा छालाको क्यान्सर रोक्नको लागि परीक्षणहरू गर्नुपर्छ। यदि यो सहि समयमा पत्ता लग्यो भने यसको उपचार सम्भव हुन्छ ।
आँखा परिक्षण:हामी सबैले आफ्नो आँखाको जाँच समयमै गर्नु पर्छ। खासगरि महिला जो सिलाई, बुनाइ, भान्छा जस्ता काम गर्छन, उनीहरुको लागि आँखाको नियमित परिक्षण धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तै ३० वर्ष पुगिसकेका महिलाहरुले पनि आफ्नो आँखाको नियमित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।
रक्तचाप:रक्तचापले धेरै समस्या र रोगहरु निम्त्याउँछ। त्यसैले महिला लगायत सबैले नियमित रूपमा रक्तचाप परिक्षण गर्नुपर्छ। यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु पनि आवश्यक छ। यदि रक्तचाप नियन्त्रण भएन भने यसले अन्य समस्याहरू निम्त्याउँछ।कोलेस्ट्रोल:कोलेस्ट्रोलको स्तर शरीरमा परीक्षण गर्नुपर्दछ। यसको स्तर असामान्य हुनाले धेरै प्रकारका गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छ ।